Somali celebrities Archives - xog baahiye
Category: Somali celebrities
Deg deg:Dahir calasow oo sir badan shaaciyay kadib xarigii Kaadheri.
Subxanallah:King ck oo sir mucjiso ah bannaanka keenay.
Subxanallah: Gabadh somali ah oo soo bandhigtay arin ay waligeed kuhamin jirtay in uu urumoobay! mxaa kajiro in ay kubiirtay sameynta muqaalo anshax xumo ah?
Deg deg: Hodan abdirahaman oo oohin afka furatay kadib muqaal sir ah oo laga haayay latusay iyo xogo kale
Inalilah mama malyuun oo Dil toogasho ka badbaaday magalada muqdisho iyado safar ku tagtay iyo dadkii ka dambeyay
Fashil:Naciimo jokar oo bannaanka keentay muuqaal sir oo ninkeedii hore ah.
Deg deg:Hodan Cabdiraxman oo laga duubay cod sir ah oo ay ku shaacisay sir culus.
Fashil:Hodan Cabdiraxman oo qeylo afka furatay kadib cod sir ah oo loo soo diray.
XOG WEYN: dabacasar oo sharma boy kusheegay inuu qaniis yahay kadib arin lama filaan ah oo soo kala dhaxgalay. Xogsir ah!